/blog/gallery/Synephrine HCL powder - burner fat na mmepu oke
Ihe na 11 / 25 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
1. Isi Synephrine HCL
Taa, ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị bi na-achọ nhọrọ iji nọgide na-enwe ezigbo ahụ ike. Ọ dị mma, n'etiti ha niile, ojiji Synephrine HCL ntụ ntụ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma ị nwere ike isi gbochie abụba na-adịghị ọcha. Synephrine ntụ ntụ bụ ọgwụ kemikal alkaloid na-adịghị ahụkebe. Ọ bụ ihe okike sitere na osisi dị ka oroma dị ilu, n'etiti ndị ọzọ.
Ọ bụ ihe kachasị eme bioactive na oroma ilu nwere ihe eji eme ihe malitere n'oge 1500s. Oleezi ihe e ji ya eme? N'oge gara aga, mgbakwunye a anwansi ejirila na ọgwụgwọ maka nsogbu nke eriri afọ dịka afọ ntachi, afọ mgbu, na ọgbụgbọ. N'akụkụ ụfọdụ nke ụwa, a makwaara na ọ bụ ọgwụ na - egbochi ọgwụ na - akpata ụra na nchekasị.
Site na mbata nke teknụzụ, oroma mmanụ ugbu a abaala uru na ịgwọkwu nsogbu ndị ọzọ nke oge a sitere na fungal na ọrịa nje, allergies, na nsogbu afọ. N’iburu n’uche na ihe dị mkpa mmanụ oroma bụ Synephrine HCL, ọ na-enye gị ihe kpatara ya ji nwee ọtụtụ ọnya ọgwụgwọ.
Ọkpụkpụ Synephrine uhere eji eme ihe bụ otu ihe ahụ dị na nke ephedrine, nke bụ otu n’ime ihe ndị kacha egbu abụba. Kaosinadị, Ephedrine anọghị n’ahịa ka ọ bụrụ mgbakwunye nri; ya mere, Synephrine bụ onye ọzọ nọchiri anya ya. Octamine bụ metabolne nke Synephrine ma bụrụ onye ama ama maka ihe ndị na-agba abụba.
2. Synephrine HCL- Usoro eji arụ ọrụ
Synephrine na-arụ ọrụ site na mgbanwe nke ike aru. Ọ na - eme nke a site na ị emetụta ụzọ imeju na - arụ ọrụ, nke na - eduga n'ịmepụta ọtụtụ enzymes ma na - ekerekwa oke ọrụ na nhazi nke mgbaze na imepụta ume na ahụ. Nchọpụta emere gosiri na Synephrine HCL (5985-28-4);
Na-egbochi glucosidase na amylase, nke bụ enzymes nke mere maka mgbaze nke nsogbu nri. N'ihi ya, o yighị ka a ga-enwe nri shuga dị n'ọbara mgbe a na-eri nri.
Ọ na - eme ka glucose dị n’anụ ahụ ike site na mkpali nke AMPK. Nke ahụ bụ enzyme nke ọrụ ya bụ ịchọpụta ọkwa mmanụ n'ime sel yana ịkwalite ọkụ nke abụba. Ọzọkwa, ọ na-eme ka inweta shuga dị n’ime sel.
Synephrine na-abawanye ụba nke ATP dị. Nke ahụ na-enye ume ọzọ achọrọ iji nyere mmeghachi omume kemịkalụ na imeju.
Ọ na - egbochi ntụgharị nke abụba ịbụ abụba.
Ọ na - eme ka glucose na mmebi glycogen daa.
Synephrine bụ onye na-adịghị ike maka alfa-1 na alfa-2 adrenoreceptors. Ọrụ abụọ ahụ site na ịzaghachi adrenaline na-ebulikwa ya ike ịbawanye ọbara na obi obi mmadụ. Ya mere, eleghi anya Synephrine 5985-28-4 enweghi ike ime ka mmụba nke obi gị ma ọ bụ mgbali ọbara.
Nke ahụ bụ isi ihe dị iche n'etiti ephedrine na Synephrine 5985-28-4, dị ka amaara dị ka ephedrine na-arụ ọrụ ma alfa-1 na alpha-2 adrenoreceptors ike.
Synephrine HCL na-akpalikwa ndị na-anabata ndị neuromedin U2. Ndị a bụ ụmụ irighiri ihe dị na hypothalamus nke na-amụba ịmụrụ anya.
Synephrine na-arụ ọrụ site na ịkwụsị mmepụta nke eotaxin-1. Nke ahụ bụ molekulu nke na - eme ka ahụ na - eme ka ọ bụrụ ihe na - eme ka ọ banye na mpaghara ọkụ. Ọ na-egbochi ọrụ NADPH oxidase, nke neutrophils mepụtara ma n'aka nke ya, na-emepụta ọtụtụ ụdị oxygen na-emeghachi omume.
Site na mbelata nke NF-kB, Synephrine na-ebelata mbufụt. Nke ahụ bụ n'ihi na NF-kB karịrị akarị bụ ihe amaara na-akpata ọrịa mbufụt dịka ọrịa psoriasis, ọrịa afọ ọsịsọ, yana ashma.
Synephrine na-arụ ọrụ site na igbochi enzyme butyrylcholinesterase na acetylcholinesterase, nke na-emebi ndị ọrịa Alzheimer.
3. Jiri Synephrine HCL Jiri
(1) Synephrine HCL maka ibu dị arọ
Synephrine bụ a arọ ntụ ntụ na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụzọ.
Dịka onye na-ebelata agụụ- You bụ udiri onye na - akụ azụ mgbe nile? Echere m, ọbụlagodi mgbe ị risịrị nri dị oke mkpa, afọ gị anaghị ewe oge tupu ya amalite ịbụ na-arịọ arịrịọ maka ihe. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịchọ ifelata, nke a bụ otu n'ime nsogbu ndị ị nwere ike inwe. Ọ dabara nke ọma, nke a arọ ntụ ntụ na-egbochi agụụ ị na-enwe ma na-agba ume iri nri, na-eme ka ahụ ju gị afọ.
N'ihi ya, ị nwere ike ịrapara na nri ahụike gị etu esi ezube ma tufuo ibu karịa. Ma tupu ị chọpụta ya, ị ga na-achọ mma ahụ mara mma bikini ahụ ị rọrọ nrọ mgbe niile.
(2) Synephrine HCL dị ka Fat Burner
Abụba gabigara ókè abụghị nanị ihe ọghọm dị na ahụike, mana ọ nwekwara ike ime ka ịjọ njọ. Ọkụ na-eweta oke uru, gụnyere ime ka ị dị ogologo ndụ. Ọ dabara nke ọma, iji Synephrine HCL bụ otu usoro enwetara enyocha ị nwere ike iji gbazee abụba ahụ. Lee otu o si enyere gi aka imezu ebumnuche a;
Dịkwuo ọkwa ume n'oge oge ọrụ
Kwesighi ịga mgbatị ahụ ma nwee ahụ ike na ụra; Synephrine nwetara gị. Ọ na-arụ ọrụ dị ka mmanụ ọkụ site n'inye gị ume niile ịchọrọ iji nwee nnọkọ na-egbu egbu. Mice ejiri Synephrine ntụ ntụ A hụrụ na ha enweela ike igwu mmiri ogologo oge, na-egosi na ọkwa ike ha amụbaala.
Site na imeziwanye ike ike, a maara Synephrine iji mee ka ọ dịkwuo mma n’egwuregwu. Nchikota mmetụta nke ike ume na ume nwere ume na-akwalite ịrụ ọrụ ma na -eme ka ọnụ ọgụgụ nke arụpụtara site na mmega ahụ aerobic na anaerobic. Nke ahụ na-eme ka ọ bụrụ nnukwu mgbakwunye ahụike tupu na a abụba ọkụ kwa.
Ọmụmụ ihe emere na ụmụ nwoke iri na abụọ gosiri na mgbe ha nwesịrị ibu a obere ntụ ntụ nkeji iri anọ na ise tupu mmega ahụ mụbaa ibu kachasị. Ha nwekwara ike ịme ọtụtụ ihe ugboro ugboro ma e jiri ya tụnyere placebo. Na mgbakwunye na caffeine, Synephrine mụbara ugboro ugboro agụchaghị ọnụ ọgụgụ squat.
Nke ahụ bụ usoro imebi abụba dị n'ahụ. A kọwara ya nke ọma dị ka metabolism. Synephrine na-arụ ọrụ site na ịba ụba nke metabolic nke ya na-eme ka otu onye na-agba ọkụ ngwa ngwa. Ọ na - akọwa ihe kpatara ị Syomi Synephrine ga - eme ka ị kpoo abụba karịa n'ihi na mgbe metabolism dị elu, ahụ gị ga - akarịrị maka abụba echekwara iji nwetakwuo.
Nchoputa emere na ya gosiputara na site na otu usoro ogwu nke 50mg, nguzogide aru ala nke basal karie site na kalori 65 maka nkeji iri asaa na ise. Mgbe ejikọtara ya na ụmụ irighiri mmiri ndị ọzọ bụ hesperidin na naringin, a hụrụ metabolism na-ebili elu karịa kalori narị asatọ na iri asatọ. A na-agba calorie dị otú ahụ ọkụ na nkeji iri abụọ nke jogging.
Mmalite nke glucose
Synephrine na-arụ ọrụ site na-akpali nkwado nke glucose site na akwara ọkpụkpụ. Nke ahụ na - enyere aka ịmị abụba site na iwepu glucose dị ukwuu na sistem ọbara. Ọ na-enyekwa aka n’inye anụ ahụ ike glucose nke ejiri rụọ ọrụ nke ọma maka ume. Yabụ, inwekwu glucose intramuscular pụtara ike akwara na ume olu.
4. Ọgwụ Synephrine HCL
Usoro ọgwụgwọ Synephrine HCL dịgasị iche n’otu onye rue onye ọzọ. Agbanyeghị, usoro ọgwụgwọ ọkọlọtọ dịka arọ ntụ ntụ bụ 100mg kwa ụbọchị. Nchoputa, otodi, egosiputa na onunu ogwu nke Synephrine HCL nke 35mg dikwa ka odi irè. Na Usoro ọgwụgwọ Synephrine HCL ekwesịghị ịdị karịa 200mg n'ụbọchị iji zere nsí.
Ọ bụrụ na ọ bụ oge mbụ ị na - ewere ya, bido jiri obere usoro nke ihe dị ka 10-20mg iji chọpụta nnabata gị. Ọ bụrụ na ịnaghị ata ahụhụ na nsonaazụ na-emerụ ahụ, ị ​​nwere ike ịbawanye usoro onunu ogwu nwayọ Emekwala ka oge a sụọ ihe ọ toụ toụ ruo ihe karịrị awa abụọ ma ọ bụ anọ, n'ihi na nke a ga-ebute oke nsonaazụ.
Maka mmetụta a na-ewuli elu nke Synephrine ma ọ bụ dị ka onye na-ere abụba, ị kwesịrị ịgba mbọ hụ na ị were ya ihe mbụ n'ụtụtụ na nkeji iri na ise ruo nkeji iri atọ tupu ịmega ahụ. A na-atụ aro ka ị were mmiri.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị nwere ike ịchọrọ iji Synephrine n'onwe ya, ndị ọzọ nwere ike ịhọrọ ịhapụ ya. Could nwere ike iji ya na ngwakọta ndị ọzọ na - eme ka ike gwụ gị. Yohimbine nwere Synephrine nke ọma, ọkachasị ma ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ isi ifelata.
L-theanine bụkwa ezigbo nhọrọ dịka ọ na-agwakọta nke ọma na mkpali ọ bụla. Ọrụ ya bụ imezi nsonaazụ ya ma bulie ọrụ ọgụgụ isi. Onwekwara ike iji ntu ala willow mee ihe n’ime ihe kwesiri ya.
Caffeine na-emekwa ka nnabata dị mma, ma ọ bụrụ na ọ na-egosipụta mmiri na-adịghị mma ma ọ bụ na ebe ndị ọzọ dị ka mịpụ guarana.
5. Zụta Synephrine HCL Online
N’enweghị obi abụọ ọ bụla, Synephrine HCL bụ grail dị nsọ nke ihe na - emebi emebi. Ọ ga - enyere gị aka iri nri gị ma ọ bụrụ na ị na - ezube iri obere nri ma ọ bụ ibelata iri nri na - adịghị mma. I nwedịrị ike ikpebi ime ka agụụ belata Ihe mgbakwunye Synephrine iri-na-anọ na anọ ma ọ bụrụ n’ịchọrọ ị na-ọsọ ọsọ.
Ọzọkwa, dị ka a hụrụ n'isiokwu ahụ, ọ na-eme ka ị nwekwuo ume, nke na-enye aka nke ukwuu, ọkachasị mgbe ịchọrọ ịrụ ọrụ ma rie obere nri. Dị ka oge ọ ga - ewe iji banye, ị gaghị ekwenye na n'ime nkeji iri atọ, ị ga - enweta mmetụta ahụ. Mmetụta a nwere ike ịnwe gị ihe dị ka elekere abụọ ebe ọ bụ na ọkara ndụ Synephrine bụ awa abụọ.
Ọ bụrụ na ejikọtara ya na nri kwesiri ekwesi na mmega ahụ, ị ​​ga-ahụ mmetụta arụmọrụ nke Synephrine na oke ibu n'ime izu abụọ nke iji. Maka onye ọ bụla na-alụ ọgụ, ị oveụbiga mmanya ókè, ma ọ bụ onye nwere mmetụta ha chọrọ iwepụ abụba dị ha n'ahụ, nke a bụ ezigbo ego!
A maara ọtụtụ ndị na-ebu abụba na-eme ka ị na-ata ahụhụ site na nsonaazụ, mana ị ga-ekwenye na Synephrine na-enye ihe a niile na-etinyeghị ahụ gị n'ihe ize ndụ? Imirikiti nyocha Synephrine na-akọ obere mmetụta na-adịghị njọ na ihe ijuanya bụ ewu ewu.
Ugbu a i kpebisiri ike iru ihe mgbaru ọsọ gị, olee ebe ị ga-enweta ihe a n’ọkụ? Dịka ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike ikwe gị nkwa inye gị Synephrine kacha mma, ị ga-akpachara anya ka ụfọdụ ndị nwere ike rere gị ngwaahịa adịgboroja. Anyị na-enye gị uru maka ego gị site na ị nye gị Synephrine Supplementment nke enweghị nchebe ma dị ire. Ozugbo ị zụta Synephrine n’aka anyị, enwetara gị obi na ị ga-agba abụba ma tufuo abụba ngwa ngwa na-adịgide.
Mmeju nke ibu anyị na - enweghị oke ebe ọ bụ na ha dị 100% enweghị ihe mgbakwunye zoro ezo. Nwee iwu ka ọ ghara iyịlata dịka 'ọrụ ebube' nke ga-ada gị taa wee tufuo kilo na-achọghị ma nwetakwa ahụmịhe ahụ Synephrine na-arụ.
Ntuziaka Ahụike Ahụike Ahụike Maka Nri Nri, nke Shawn M. Talbott, Kerry Hughes, peeji 13
Ibu oke: oria, oria ogwu, na mgbochi, mbipụta nke abụọ, nke Debasis Bagchi, Harry G. Preuss dere, peeji nke 538
Nlekọta ihe oriri na-edozi ahụ na Egwuregwu na Mmega Ahụ, nke Mike Greenwood dere, Douglas Kalman, Jose Antonio, peeji 231